Birman - မြန်မာ - We Are Human! . . . . . . . . WAH!
ငါ YOU "လူ့" က "လူ့" ဖြစ်၏။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသပိတ်မှောက်အောက်တိုဘာလ 25, 2016 ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်တိတ်တဆိတ်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းရှိခေါင်းဆောင်များကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်စားပြုပြီးနှင့်ဤငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်, ကံမကောင်းတာကဒီ "ငြိမ်းချမ်းရေး" ဖြစ်ပျက်နှငျ့ "စစ်ပွဲများ" ဟုသမဂ္ဂများနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပေမယ်တိုးပွားလာလျက်ရှိသည်မ တော်တော်များများလူအမျိုးမျိုး, အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ငါတို့အဘို့အဆုံးဖြတ်အခြားအစောင့်ဆိုင်း?
ဒီသပိတ်အားဖြင့်, ငါ၏အလိုဆန္ဒကိုဂြိုဟ်ရဲ့လူဦးရေရဲ့အများစုငြိမ်းချမ်းရေးလောလောဆယ်တွင်လိုလားစည်းလုံးကြကုန်အံ့, ကို "လူ့" အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကောင်းစွာချင်လိမ့်မည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောသူအားလုံးမှသက်သေပြဖို့ဖြစ်ပါတယ် သင်သိပါစေခြင်းငှါ, "လူ့" ၏အသက်နှင့်ရှင်သန်မှုအဘို့, နောက်ဆုံးမှာကြားဖြစ်တစ်ဦးတည်းသာစကားသံကိုဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးပူးပေါင်း။
ကျနော်တို့ဒုတိယဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပါသည်, ဤလောက၏ပြောင်းလဲနည်းပညာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများရှိသည်, ပထမပြည်ထောင်စုသည်။
ငါသည်တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှု, "လူ့" ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်အသီးအသီးမြို့သို့မဟုတ်နေရာများကိုအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏မြင့်သောအရပ်တို့ကိုရှေ့တျော၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေချီတက်ပွဲနှင့် sittings အားဖြင့်သတ်မှတ်လိမ့်မည်ဟုလှုပ်ရှားမှုတင်ပြသည်။
"ယဉ်ကျေး" ဟုခေါ်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းကို, သတင်းအချက်အလက်၏အရင်းရှင်စနစ်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အသက်ရှင်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြောက်မက်ဘွယ်သောအကြောက်အသုံးပြုခဲ့ကြနှင့်သတင်းစာများတွင်, အခြားသူများကသူနေ့တိုင်းသည်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ရာများအကြောင်းနထေိုငျ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအခက်ခဲဆုံးနှင့် bravest သူရဲကသူ့၏တိတ်ဆိတ်အတွက်သူ့မိသားစုနှင့်အတူထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ဖြစ်ဘယ်တော့မှတံ့သောအရာကို "လူ့" အလိုဆန္ဒစစ်ပွဲမျိုးကို ?, ခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုများခံစားခဲ့ရပြီလော, ရပ်တန့်ရမယ် အိမ်မှာ။
ကိုငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်, များစွာသောလူကျွန်တော်ဘာမှလုပျနိုငျထင် "လူ့", သင်သည်အစဉ်အသငျသညျတှငျဤအမျက်ဒေါသခံစားယခုသင်, တစ်ခုခုလုပ်ရန်ရှိသည်ကပြောပါတယ်ကဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တစ်ဦးပိုကောင်းကမ္ဘာစေမည်နှင့်ဤတစ် Utopia မဟုတ်ပါဘူးအတူတူပြုမူ! ဒီစားသုံးသူလူ့အဖွဲ့အစည်းစရာအနာဂတ်ကျနော်တို့ကို "COMPANY" ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်, ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကအချို့သောသူတို့၏အကြောင်းတရားများဖို့အားလုံးကို "လူ့" ဝိုင်းရံကြဖို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, ထို့နောက်ကြောင့်အယူမှားသည်, အခြားလူနေမှုပုံစံစတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး, စစ်၏ဆိုးကိုလိုအပ်ကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့လာ သူတို့ရဲ့စကားကိုအတွက်:
Utopia "," တခြားနေရာတွေမှာပိုဆိုးရှိပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ရေတွက်မထားဘူး" ဟုဤကဲ့သို့သောနေရာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်, "" သင့်အကြောင်းဘာမဆိုလုပ်နိုင်တယ် "", "" ညည်းညူရပ်တန့် "," အိပ်မက်ကိုရပ်တန့် "! "စတာတွေ ...
မကြာခဏသူငယ်ချင်းတွေရဲ့သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများကပြုတတ်ကြ၏သည်ဤစကားကြားရကြပြီ, ဤစာပိုဒ်တိုများသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်သေဆုံးမှုဖြစ်လာကြပါပြီ, သေးဥပဒေတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲဒီဥပဒေတွေပြောင်းလဲအတွက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ် အသီးအသီးတိုင်းပြည်ငါတို့သည်ဤလောကရှိချင်ဘယျသို့ပွုနိုငျကွောငျးကျွန်တော်တို့ကိုပြသနေသည်။
အဖြစ်မှန်ကကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုလိုအပ်နေပါသည်များအတွက်အခြားကမ္ဘာ, ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်, ကျနော်တို့ဘာမှမပြုကြဖို့ဆက်ပြီးလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကြာကြာ, ကလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါပေမယ့်တုံ့ပြန်ရန်အချိန်ဖြစ်သနည်း ကျမတို့ကလည်းဘယ်တိုင်းပြည်ထွက်ခွာကြောင်းတွေ့မြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းသက်လာအများအပြားဆဲအင်အားအကောင်းဆုံး၏ပညတ်တရားကိုခံယူဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဘယ်လိုနေသလဲ? ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာစိတ်ကူးမရလျှင်တုံ့ပြန်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်-သောသူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ es မိမိကိုမိမိမကယ်မလွှတ်, ကုန်ခမ်း, တိုက်ခိုက်, အခြားသူများကိုဖွင့်ခုလုံးမဲမှောငျအလွန်အကျွံထုတ်လုပ်နေစဉ်, ဖြုန်းတီး, အဘယ်ကြောင့် "လူ့" အတွက်ဒုက္ခဖန်တီးကြောင်းမူဝါဒများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်။
လူ့ "" ငါခေါ် ": လမ်းသွားလမ်းလာ, ယာဉ်မောင်း, မင်းသား, ယုံကြည်သူများ, THE မဟုတ်သည့်ယုံကြည်သူ, THE အဆိုးမြင်သူများ, ဆငျးရဲတဲ့, Rich, မိုက်သောသူ, မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုရှောင်ကြဉ်, THE ARISTOCRATES THE PRV, THE စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ, ဆရာဝန်, လူငယ်, Old, အနုပညာရှင်ယုံကြည်မှုများ, အလုပ်သင်, ပျင်းရိ, ညစ်ညူးသော, မူးယစ်ဆေးဝါး, အရက်, ကပ်ပါး, သားကောင်များ, THE အာဏာတကယ်ပြောင်းရွှေ့ရန်နေချင်သောအားလုံး ဒီနည်းကိုလောက။ "
ငါသည်သင်တို့ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသပိတ်မှောက်အောက်တိုဘာလ 25, 2016 တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါ။
အားလုံးအတူတူ, တစ်ခုတည်းပြောဆိုချက်ကိုနှင့်တသားတလူ, ငြိမ်းချမ်းရေး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး, universal အကူအညီများအဖြစ်။
သင်တို့နေရာသပိတ်, ခေါင်, မြို့ခန်းမရှေ့တွင်သံရုံးကိုသရုပ်ပြလိမ့်မည်, သင့်ကို Facebook, Twitter နဲ့အခြားခွဲဝေမှုဆိုက်များတွင် link တစ်ခု post, သင့်မိသားစု, သင့်မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြ, ဒီ site ၏ address ကိုရှောက်သွားစေပါ နေရာတိုင်း, ဘုံဗိမာနျ, !!
sittings ဘို့ -subject:
1: ဘဏ်တွေ - ငါတို့ရှိသမျှသည်နိုင်ငံများ၏အကြွေးတွေဖျက်လျှင်ဘဏ်များအချိန်အတွက်တကယ့်အရှုံးခံရမယ်လို့သလဲ? - ဤ deletion 'set up လုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? - ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအပေါ်အဘယ်အရာကိုမှန်ကန်သက်ရောက်မှု?
2: royaumes-- အဘယျသို့နညျးလမျးကိုရာဇဝငျသူတို့ရဲ့လူတို့အားဥစ္စာဓနပြန်လည်ဖြန်ဝေအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ရှိသည်နိုငျသလဲ ဥပမာထိုင်း
3: population-- အဘယျသို့သက်ရောက်မှုဤသူစစ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ယုံကြည်စိတ်ချသူ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်, လူတိုင်း၏အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသပိတ်မှောက်ရှိလိမ့်မည်နည်း
4: လက်နက်ကိုင်များအား "လူ့" ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်ဆောင်နေစီတိုင်းပြည်အတွက်တန်းတူတပ်မတော်စိတ်ကူးရှိသည်ဟုနိုငျသလဲ
5: နိုင်ငံရေး - အောက်ပါစိတ်ကူးများစတင်:
ပါဘူးရှငျကောင်းသောနိုင်ငံသားအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်: ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်သည့်အတွက်အသက်ရှင်သောပတ်ဝန်းကျင်တာဝန်ရှိသည်; ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးမှုကိုရှောင်ရှား; ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုများသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီး၏မည်သည့်လုပ်ရပ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်;
c- လူတိုင်း၏စိတ်တွင်အဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပြုစု install;
ပိုပြီးထောင့် d- ရပ်တန့်စားနပ်ရိက္ခာ overproduction နှင့်လမ်းကြောင်းထုတ်ကုန်။
ပညာရေးအကဲခတ် f-, လူအပေါင်းတို့အားပွင့်လင်းကျယ်ပြန့်ပညာပေးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးသူလူ့အဖွဲ့အစည်းမှကွဲပြားခြားနားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမြစ်ကိုဖန်တီးရန် -Try ။
ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန္ဒပြနေ့နေ့အခြားခေတ်အစအဦးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် "လူ့" ၏လေးစားမှုအဘို့အလုပ်ရပ်၏ရက်ပတ်လုံးဖြစ်လာအတိုင်းလိုက်သောနေ့ရကျပါစေကြကုန်အံ့, ထိုလမ်းရှည်လျားဖြစ်လိမ့်မည်ဒါပေမယ့်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်း ယုံကြည်. အတူတူပြုမူလျှင် -y, ငါတို့သည်အခြားမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့သမဂ္ဂများသက်သေပြပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့၏အနာဂတျအတှကျသတိပြုမိဖြစ်, အရက်အလွဲသုံးစားမှုကိုရှောင်ရှား, မရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိအကြမ်းဖက်မှုကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့တခြားသူတွေအတွက်တာဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဤနေ့စဉ်အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးကျနော်တို့ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှသက်သေပြ ။
Facebook ပေါ်မှာစာမကျြနှာကဲ့သို့, သတင်းလွှာမှ Subscribe, သင်တန်းသားများ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။